War deg deg ah oo kasoo baxay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
War deg deg ah oo kasoo baxay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in haatan la diyaariyay liiska ay ku qoran yihiin xubnaha ka mid noqonaya golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la filayaa in xilliyadda soo socdo uu si rasmi ah ugu dhawaaqo xubnaha golaha wasiirada cusub oo ka koobnaan doonno illaa 25 wasaaradood.
Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa la isugu yeeray goobta lagu shaacin doonno xubnaha golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya.
Waxaa saacadihii ugu dambeysay si weyn loo hadal haayay in liiska golaha wasiirada ay wejiyo cusub ku jiri doonaan, iyadoona sidoo kale isbedel weyn lagu sameeyay awood qeybsiga wasaaradaha muhiimka ah.
Dhinaca kale, warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in laga yaabo in ku dhawaaqista golaha wasiirada dib loogu dhigo maalinta berrito gelinka hore, kahor inta uusan magaalada Muqdisho ka amba bixin madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalinta berrito uu u amba-baxo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, si uu uga qeyb-galo shir madaxeedka IGAD ee dhawaan halkaasi ka furmaya.